यी हुनसक्छन् पीपीएल टि-२० का सरप्राइज प्याकेज | Hamro Khelkud
म्यानचेस्टर सिटी टोटेनहमसँग खेल्दै
पन्जावसँग खेल्दै दिल्ली,सन्दीपको सम्भावना कस्तो ?
ब्यालोन डी’ओरमा रोनाल्डोभन्दा मेसी बलियो
म्यानमारमाथि नेपालको सहज जित
नेपाललाई म्यानमारको सामान्य लक्ष्य
रत्नजितलाई पराजित गर्दै दिपेश नयाँ राष्ट्रिय च्याम्पियन
यी हुनसक्छन् पीपीएल टि-२० का सरप्राइज प्याकेज
शनिबार, कात्र्तिक ३, २०७५
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – पोखरा रंगशालास्थित क्रिकेट मैदानमा आगामी शुक्रबारदेखि पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) सुरु हुँदैछ । सहभागी ६ टोलीले केहि साताअघि नै अक्सनमार्फत आफ्नो टोली निर्माण गरिसकेका छन् ।
अब सबै टोलीले अक्सनबाट बनेको टोलीमा दुई स्थानीय र दुई विदेशी खेलाडी थप्न पाउने प्रावधान छ । अक्सनमा सबै टोलीले कम्तिमा १० खेलाडी छानेका छन् । चितवन राइनोज र हुलास काठमाडौं रोयल्सले १०-१० खेलाडी छनोट गर्दा पोखरा पल्टनले ११ र विराटनगर टाइटन्सले १२ खेलाडी चुन्यो । एक्स्पर्ट धनगढी ब्लुज र बुटवल ब्लास्टर्सले १३-१३ खेलाडीलाई आफ्नो टोलीमा सम्मिलित गरेका छन् ।
अक्सनमा आफूले अनुबन्धन गर्ने विदेशी खेलाडीलाई आधार मनाएर टोलीहरुले खेलाडी छनोट गरेका छन् । कागजी रुपमा हेर्दा चितवन राइनोज र पोखरा पल्टनको टोली बलियो छ । तर विगतमा आयोजित फ्रेन्चाइज लिग हेर्ने हो भने यस्ता प्रतियोगिताले केहि नयाँ प्रतिभालाई उदाउने प्लाटफर्म प्रदान गर्छ । सबै टोलीको हालसम्म समीकरण हेर्दा केहि यस्ता खेलाडी छन् जसले आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्छन ।
सागर ढकाल (एक्स्पर्ट धनगढी ब्लुज)
सागर ढकाल घरेलु क्रिकेटमा उदाउँदा प्रतिभा हुन् । ग्रेट हिमालयन क्रिकेट एकेडेमीका खेलाडी सागर हाल यू-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पनि सदस्य हुन् । स्थानीय प्रतियोगिताहरुमा उच्च प्रदर्शन गर्दै लगातार विकेटको सुचिमा आफ्नो नाम राख्न सफल सागरलाई अक्सनमा धनगढीले १ लाख ३० हजारमा खरिद गरेको हो ।
अक्सनमा अन्य टोलीले पनि उनीमाथि बोली लगाएका थिए । तर धनगढीले अपेक्षा गरीभन्दा पनि बढी रकम तिरेर उनलाई टोलीमा सामेल गरेको छ । धनगढीको टोलीमा मुख्य स्पिनरका रुपमा सागर नै छन् । टोलीले उनीमाथि धेरै विश्वास गरेको छ । अर्का स्पिनर रोबिन क्षेत्री छन् भने मार्की खेलाडी दीपेन्द्रसिंह ऐरी पनि पार्ट टाइम स्पिनर नै हुन् ।
भीम सार्की (बुटवल ब्लास्टर्स)
मध्यक्रममा आक्रामक ब्याटिङ गर्ने क्षमता देखाएका भीमलाई टोलीमा समेट्न बुटवल ब्लास्टर्सले १ लाख ५० हजार खर्चियो । पोखराले पनि अक्सनमा अधिकतम १ लाख ५० हजार बोली लगाएपछि गोलाप्रथामा बुटवल भाग्यमानी भएको थियो । भीमले पछिल्लो समय घरेलु क्रिकेटमा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । धनगढी प्रिमियर लिगमा कुनै टोलीमा पनि खरिद नगरेको भीममाथि यसपटक भने अधिकतम बोली लाग्यो ।
प्रधानमन्त्री कपमा आर्मीको लागि उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका भीमले यू-१९ उमेर समूहमा पनि राष्ट्रिय टोलीका लागि औसत प्रदर्शन गरे । उनको ब्याटिङ त आकर्षक र आक्रामक छ नै उनको फिल्डीङ पनि उत्तिकै राम्रो छ । घरेलु क्रिकेटमा उनी ‘जोन्टी’ नामले परिचित छन् । दक्षिण अफ्रिकाका नामुद फिल्डर जोन्टी रोड्सलाई आधार मान्दै उनको नाम रहन गएको हो । पोखराको मध्यक्रममा उनले सिद्धान्त लोहनी र मार्की खेलाडी सोमपालसँग आक्रामक ब्याटिङ गर्ने अपेक्षा हुनेछ ।
रसिद खान (पोखरा पल्टन)
तीव्र गतिका युवा बलर रसिद खानले घरेलु क्रिकेटमा छोटो समयमै आफ्नो पहिचान बनाइसकेका छन् । अघिल्लो वर्ष यू-१९ राष्ट्रिय टोलीमा परेका उनले त्यसयता फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिगमा पनि राम्रो प्रभाव जमाए । उनको प्रदर्शन देखेर पोखराले रसिदलाई टोलीमा समेट्न ७० हजार रुपैयाँ खर्चन पर्यो । उनले एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा ललितपुर प्याट्रीएट्सका लागि डेथ ओभरमा गरेको बलिङ प्रशंसनीय थियो ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय टोलीमा नेट बलरका रुपमा समेत बोलाइएका रसिदले यसपटक पोखराको बलिङ आक्रमणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पाउने सम्भावना छ । महबुब आलम र कृष्ण कार्कीजस्ता बलरको अनुभवले उनलाई थप सहयोग पुग्नेछ । शरद भेषावकरले युवा प्रतिभालाई उचित ढंगले प्रयोग गरेको उदाहारण प्रशस्त छन् । रसिद उक्त सुचिमा अर्का एक उदाउँदा प्रतिभा बन्न सक्छन् ।
पृथु बास्कोटा (काठमाडौं रोयल्स)
एक समय नेपालको मध्यक्रमको ब्याटिङको भविष्यको रुपमा हेरिएका पृथुको करिअरलाई चोटले अगाडी बढ्न दिएन । पछिल्लो समय व्यक्तिगत कारणले गर्दा फिट हुँदाहुँदै पनि पृथु क्रिकेटबाट टाढा रहनुपर्यो । यसपटक काठमाडौंको टोलीले पृथुलाई टोलीमा समेट्न १ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चियो । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले निकै विश्वास गरेका खेलाडी हुन् पृथु ।
बेलाबेलामा उनको अफ स्पिन बलिङ पनि टोलीलाई काम लाग्न सक्नेछ । तर उनको मुख्य भूमिका भनेको मध्यक्रम ब्याटिङलाई सम्हाल्नु हुनेछ । पृथुका लागि अहिले राष्ट्रिय टोलीमा फर्कने सम्भावना एकदम न्यून छ । तर उनले घरेलु क्रिकेटमा राम्रो छाप बसाएर त्यहाँसम्म यात्रा तय गर्न सक्नेछन् । उनले आफ्नो स्तर यसअघि पनि देखाएका छन् । यसपटक ज्ञानेन्द्र मल्ल र अमरसिंह राउटेलासँग मिलेर पृथुले काठमाडौंको मध्यक्रम सम्हाल्नेछन् ।
शनिबार, वैशाख ७, २०७६
स्वदेश आगमन, रातभारको यात्रा अनि सवेरै मैदानमा !
ब्राजिली रिचार्लीसनलाई अनुबन्ध गर्ने बार्सिलोनाको अन्तिम तयारी
कोहलीको शतक र अलीको अलराउण्ड प्रर्दशनमा बेंगलोरको रोमान्चक जित
भारोत्तोलनः एकै दिन ११ नयाँ राष्ट्रिय किर्तिमान
‘पछिल्लो कार्यकालमा धेरै सिके’ – अध्यक्ष शाह
‘वार्षिक ६ लाखजति कमाउँछु’ – यू१९ कप्तान रोहित
शुक्रबार, चैत्र २२, २०७५
प्रशिक्षक कालीन २ वर्षका लागि अनुबन्धित
आइतवार, फाल्गुन १२, २०७५
नेपाली ‘जोन्टी’ भीमको त्यो क्याच !
बुधबार, फाल्गुन १, २०७५
सन्दीप आईपीएलको इमरर्जिङ प्लेयर अवार्डको मनोनयनमा...
हैदरावादको नाटकीय हारसँगै दिल्ली दोस्रो स्थानमा...
विमलले पनि टिसी स्पोर्ट्सबाट खेल्ने!...
मलेसियामाथि नेपालको सहज जित...
मेस्सीको दुई गोलसँगै बार्सिलोना सेमिफाइनलमा...